အမျိုးသမီး - ရက် ၉၀ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးလာသည်။ အရာအားလုံး ပို၍ ပျော်စရာကောင်းလာပြီ။ ယခုအခါဆက်ဆံရေးသည်ကောင်းမွန်လာပြီ - သင်၏ Brain On Porn
လိင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ ကျွန်တော့်စေ့စပ်ထားသူလည်းစွဲစွဲလန်းလန်း nofap hardmode စိန်ခေါ်မှုကိုကျွန်တော်နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏ရက်ပေါင်း ၉၀ သည်လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ခန့်ကဖြစ်သည်။ ငါဒီမှာငါပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုပါပဲ။
ကြှနျတေျာ့စေ့စပ်နဲ့ငါ့ကြားဆက်ဆံရေးလမ်းထက်ကျော်လွန်ပါကအစဉ်အဆက်ခဲ့တယ်ထက် သာ. ကောင်း၏
ငါကြည့်တာကိုရပ်တန့်လို့ဒီအပြောင်းအလဲတွေကလုံးဝမဖြစ်ပါဘူး hardmode စိန်ခေါ်မှုအပါအ ၀ င်ဒီအပြောင်းအလဲတွေအားလုံးဟာဆန္ဒကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ Nofap သည်ဓာတ်ကူပစ္စည်းမဟုတ်ပါ၊ ပြောင်းလဲလိုသောဆန္ဒလည်းဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိခြင်းကနေစူပါအင်အားကြီးတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနဲ့စွဲလမ်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲပြီးလုံ့လဝီရိယရှိရှိအလုပ်လုပ်တဲ့အင်အားကြီးမားမားတွေရှိတယ်။ ငါထင်တာကတော့မင်းရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုမရပ်တန့်စေဘူးဆိုတာမင်းကို 'စူပါပါဝါ' တွေဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊
ကျနော်တို့ hardmode ဆက်လက်ကြမည်နည်း ကျနော်တို့ဟုတ်တယ်, လာမယ့်မတ်လလက်ထပ်ရသည်အထိ။ ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်စေပြီ။
ကျနော်တို့ porn ကိုကြည့်မရကိုဆက်လက်ကြမည်နည်း ဆက်ဆက်။
nofap ကိုဆက်လုပ်မလား။ ကျနော်တို့လက်ထပ်မှီ, ကျိန်းသေ။ ထို့နောက်? ငါတို့မသေချာဘူး
ပထမရက်သတ္တပတ် / လကဲ့သို့ယနေ့ခေတ်တွင်ခက်ခဲနေဆဲလား။ မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံး ၂ လခွဲမှ ၂.၅ လအတွင်းကျွန်ုပ်ရင်ဖွင့်သွားသည်။ ငါ porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတပ်မက်တော့ဘူး။ ငါသိသာထင်ရှားနေဆဲဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထိုနှိုးဆော်သံကိုယူလိုသောဆန္ဒအနည်းငယ်သာ။
သင့်တွင်အထူးသဖြင့်ကျား၊ မရေးရာမေးခွန်းများရှိပါကအခမဲ့မေးမြန်းပါ။ ကျွန်ုပ်ယောက်ျားသည်ကျွန်ုပ်၏ခရီးကိုနားလည်ရန်ကူညီလိုသည်သို့မဟုတ်ထိုတွင်ရှိသောအမျိုးသမီးများအားအကြံဥာဏ်ပေးချင်သည်။
LINK - 90 နေ့ကအစီရင်ခံစာ-hardmode-ကနေအမျိုးသမီး
post ကိုအောက်မှာ comments
nofap မီ, သင့်ကိုယ်သင်နေတဲ့လိင်အရာဝတ္တုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာလဲ ဘာမှကြောင်းကိစ်စတှငျပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီလော
အရမ်းအများကြီး။ nofap မတိုင်မီက၊ ငါ့စေ့စပ်ထားသူ (ထိုအချိန်ကရည်းစား) နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ပွင့်လင်းသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ ငါတက်ယူခဲ့။ , သူသည်ငါလိုချင်သောစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရန်။ ငါတို့အတူတူလုပ်ခဲ့တာအားလုံးဟာလိင်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေပဲ။ (မှတ်ချက် - ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာမူလကမကောင်းဘူးလို့ငါမပြောဘူး။ ငါတို့လိုပဲ။ )
ငါတို့ရပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆက်ဆံရေးအသစ်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တာနဲ့တူတယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးပြောတာက 'ငါတို့ကိုရှာတွေ့' တာပဲ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကထက်အခုပိုကောင်းတယ်။ တကယ်တော့ငါတို့မှာလိင်ကိစ္စထက်ပိုပြီးတည်ဆောက်ထားတယ်။
ထို့နောက်ငါကြယ်သုံးပွင့် / လေးယောက် / ဂိုဏ်းဂိုဏ်းသရုပ်ဆောင်သောသူတို့အားမျက်နှာသာ, porn ကြယ်များကိုကိုးကွယ်။ သူတို့ကိုငါအရမ်းအတိုင်းအတာအထိလုပ်ချင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီခံစားချက်တွေကအခုထိရွံစရာကောင်းနေပြီ။ ငါကတစ်မျိုးတည်းသောအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျေနပ်ရောင့်ရဲပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အိပ်မက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးဖြစ်ခြင်း (ထပ်မံပြောရရင်၊ ကိုယ့်အမှားအတွက်ပဲ၊ လေးပုံတစ်ပုံ / အရာအားလုံးဟာမူလကပင်မှားယွင်းနေသည်ဟုမပြောခြင်း)
အကြှနျုပျ၏စိတ်ဓာတ်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတစ်ခုအဖြစ်မသတ်မှတ်တော့ဘဲအခြားလိင်ဆိုင်ရာအရာများကိုလည်းမစဉ်းစားတော့ပါ။ ငါမြင်တဲ့သူတိုင်းဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများအား၎င်းတို့အားဆက်ဆံခြင်းကြောင့် 'တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်' ဟုယူမှတ်ခံရသည့်အမျိုးသားများနှင့်တူသည်ဟုခံစားမိသည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွင်းပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများအပေါ်ဘယ်သောအခါမျှပြုမူပြောဆိုခြင်းမရှိသော်လည်းကွဲပြားမှုကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။
ငါနေဆဲယောက်ျား objectifying နှင့်အတူရုန်းကန်နေရသည်။ ၎င်းသည်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသောနေရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဲဒါကကျွန်မကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းစေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါကအတွေး / ခံစားချက်တွေကိုချက်ချင်းပြုပြင်ပြီးဆက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။